Ka 29, 2018 admin
Japan ịhụ 6 ọhụrụ kaadị mgbanwe
Japan si 6 abịa kaadị nyiwe na-na-na-ulo oru site na ọha na eze na ụlọ ọrụ ndị e depụtara na Tokyo Stock Exchange.
Ụlọ ọrụ ndị a kpughere nke a bụ mbụ ha na oge na-eme azụmahịa dị ka a cryptocurrency mgbanwe n'elu ikpo okwu.
Bithumb mgbanwe bans erekwa na 11 mba
One of South Korea kasị ukwuu cryptocurrency mgbanwe, Bithumb, ka a mara ọkwa na ọ na-machibido digital akpan owo trading na a ọnụ ọgụgụ nke mba, tinyere North Korea, Iran, Iraq na Sri Lanka, tinyere asaa ndị ọzọ ebe.
Mba ndị a nwere a kpọrọ dị ka elu n'ihe ize ndụ site na Non-Cooperative mba na ókèala (NCCT) igba.
Japanese ozi g ...
Yahoo agụnye BTC t ...
ngọngọ yinyekaadịcryptocurrencymgbanweozin'elu ikpo okwu
Next Post:Gịnị cryptocurrency na-investors gwara ere, na nke onye na-?